FIRONGATRY NY HERISETRA ARA-NOFO AO SAMBAVA : Miisa efatra ireo zaza voaolana ao anatin’ny roa volana
Raha ny loharanom-baovao voaray tato ho ato, miparitaka eny amin’ny tambajotran-tserasera, haino aman-jery maro samihafa dia misongadina fa iharan’ny herisetra ara-nofo ny zaza amam-behivavy. 19 avril 2019
Faritra maro eto amintsika no lasibatra amin’ity tranga ity ary isany nazahoam-baovao matetika tamin’izany ny ao amin’ny Faritra Sava, tapany Avaratry ny Nosy iny. Araka ny angom-baovao voaray dia zaza miisa efatra be izao no voaolana tao anatin’ny roa volana nifanesy izay. Velon-taraina tanteraka ny ray aman-dreny niteraka, ireo mpanabe manoloana ny zava-misy.
Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana araka izany mba hitondra vahaolana mahakasika ity raharaha ity. Raha tsiahivina ireo herisetra nifanesy tao an-toerana, tovolahy kely iray izay voaporofo fa avy nijery horonantsary mamoafady no nanafina zazavavikely manodidina ny telo taona nanomboka tamin’ny 6 ora sy sasany hariva, ny talata teo tao amin’ny Fokontany Antognopahitra, Kaominina Bemanevika Distrikan’i Sambava.
Afaka adiny roa taty aoriana izay vao hita ilay zaza ka nahitana ratra tany amin’ny mahavehivavy azy. Naiditra hopitaly ilay zaza niharan’ny herisetra ary mbola manaraka fitsaboana ao Sambava hatramin’izao. Ankoatra io zaza io dia fantatra ihany koa fa mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina iray no tratra nanolana ny zazavavy mpianany vao 12 taona monja. Manaraka izany , ankizivavy vao 9 taona no naolan’ny anadahin-dreniny tao amin’ny Kaominina Bemanevika ary koa ilay tovolahy manan-kilema nanolana zaza efa-taona tao amin’ny Fokontany Antsirabe, Kaominina ambonivohitra Sambava.
Manaporofo tokoa ireo rehetra ireo fa ianjadian’ny herisetra ara-nofo tanteraka ireo zazavavy tsy ampy taona any amin’ny Faritra Sava iny. Miandry fandraisan’andraikitra avy amin’ny mpitondra fanjakana ny mponina ao an-toerana hatreto.